सोची शहरमा, हामी यस लेखमा वर्णन जो को जलवायु, हाम्रो देशमा, आफ्नो गर्मी अनौपचारिक "राजधानी" छ। यो काला सागर को उत्तर-पूर्वी तट मा स्थित छ।
जलवायु क्रिमीआ र सोची उच्च चासो एउटा कारण। यो सहर-रिसोर्ट मौसम लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा, हामी शहर मुखी सक्नुहुन्छ रुचि हो - मौसम अवस्था संधै पर्यटकहरु प्रसन्न हुन्छु। केही पनि तिनीहरू यहाँ यस सन्दर्भमा एउटा निरपेक्ष फेला भन्छन्। सोची जलवायु तपाईं प्रसन्न हुनेछ, एक सही यसको उद्देश्य संग यात्रा पंक्तिबद्ध मात्र छ। तपाईं यो लेख पढेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ।
शहर मा पर्यटक सिजन
आज सोची संघीय स्थिति छ जो सबै भन्दा ठूलो रूसी आधुनिक रिसोर्ट छ। उहाँले सोची लम्बाइ 146 किलोमिटर छ रूपमा, युरोपेली शहर बीच सबैभन्दा लामो एक पनि हो। यो शहर एक अद्वितीय स्की, balneotherapeutic, भ्रमण रिसोर्ट, साथै व्यापार र खेल केन्द्र, छ तेजी विकास। यो शहर 2014 ओलम्पिक खेल आयोजना गरिने निर्णय स्वीकृत गरेपछि धेरै सभा हल निर्माण गरिएको छ, नयाँ अवसर र होटल, साथै विभिन्न पर्यटन र खेल सुविधाहरु।
अप्रिल देखि जस्तै शहर को जनसंख्या बारे 400 हजार बासिन्दाहरू हुँदा,4लाख मानिसहरूलाई वृद्धि, नोभेम्बर रहन्छ जो सिजन मा जनसंख्या।
सोची, तपाईंलाई थाहा रूप मा, गर्मी छ एकदम एक महंगा शहर किनभने खाना उत्पादन, साथै होटल कोठा को skyrocketing लागत लागि बढ्दो मूल्यहरु को यो समय मा छ। र 45-80% अन्य कुनै पनि समयमा भन्दा बढी -, र उच्च सिजन मा (जुन देखि लेट अगस्ट गर्न) होटल आवास सामान्यतया अप्रिल देखि मई को अन्त गर्न द्वारा 20% खर्च हुनेछ। पर्यटकहरु को विशाल बाढी गर्मी अवलोकन छ यस्तो मूल्य निर्धारण नीति कारण। सोची यो समयमा तारा दौरे आउँछन्। फिलिम निर्माता को लागि एक वास्तविक Mecca, साथै व्यावसायिक connoisseurs र सिनेमा प्रेमीहरूलाई - र, को पाठ्यक्रम, को "Kinotavr" अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति छ जो चलचित्र महोत्सव बारेमा भूल छैन।
कम सिजन मा सोची
कम सिजन स्पष्टै यस शहर मा व्यक्त। एक समुद्र तट को समाप्तिमा लगभग तुरुन्त स्की खुलेको छ। एउटा सानो सहरमा प्रारम्भिक डिसेम्बर र मध्य-मई गर्न लेट अप्रिल देखि मध्य-नोभेम्बर शान्त अवधिको लागि विशिष्ट। छुट्टी-घर को प्रस्थान पछि व्यवसाय यात्राहरू, सम्मेलन र फोरम समयमा सुरु हुन्छ। शहर मा, उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी फोरम द्वारा आयोजित, र एक पर्यटक जटिल "Dagomys" कहिल्यै निसस्त्रीकरण को मुद्दा सम्बोधन जो संयुक्त राष्ट्र बैठक, लिन।
को स्नान मौसममा सोची
समुद्र तट सिजन लेट मे मा खुल्छ। यस समयमा, पानी warms ° 18 अप गर्न सी यो, पाठ्यक्रम, आराम पौडी खेल्न कम दर, तर जो राम्रो मौसम लिइएका गर्न सकिन्छ Sunbathing, रद्द गरिएको छैन। र यो वसन्त nepozdno आउँदा, सामान्यतया न्यानो छ। जुन को बीचमा पानी तापमान 21 ° C पुग्छ, र जुन मा तातो दिन को स्थापना संग 23 ° सी मा खुसीले गदगद परिवार त्यसैले मिड-गर्मी देखि यस शहर को समुद्र तट मा आफ्नो बच्चाहरु संग आराम गर्न रुचाउँदैनन्। अगस्ट मा समुद्र धेरै न्यानो हुन्छन्। यसको तापमान 25 ° सी मा खडा छ
सोची बेला शिखर सिजन
शरद ऋतु को पहिलो दिनमा तातो मौसम रमाइलो न्यानो तरिका दिन्छ। को मखमल सिजन भनिन्छ यो अवधि, धेरै पर्यटकहरु द्वारा प्रेम गर्नुभयो। सोची, एक नियम, यो कहिले काँही पनि अर्को महिना को पहिलो दुई हप्ता सहित, सेप्टेम्बर को अन्त सम्म रहन्छ। यस समयमा, पानी तापमान पुग्छ 22-23 ° सी यो सोची मा अक्टोबर मा पौडी खेल्न सम्भव हुनेछ कि थाहा असम्भव छ। यो जलवायु यो गर्न सधैं सम्भव छ। यस समयमा, यो सबै जो पर्यटकहरु दीर्घ आँधीबेहरी र वर्षा, balamutyaschimi समुद्र को "सुसमाचार" हुन सक्छ मौसम को vagaries, मा निर्भर गर्दछ।
पर्यटन लागि सबैभन्दा अनुकूल अवधि
सोची को क्षेत्र मा स्थित विभिन्न धेरै आकर्षण। बीचमा उनलाई मानिसले बनाएको वा स्वाभाविक निरन्तर रूपमा प्रस्तुत छ। आकर्षक यात्रा मात्र राम्रो मौसम लाभ हुनेछ। त्यसैले यात्राहरु जुन को पहिलो आधा सम्म अप्रिल को अन्त देखि अवधिको लागि योजना सल्लाह र सेप्टेम्बर देखि प्रारम्भिक अक्टोबर गर्न।
को "Krasnaya Polyana" स्की सिजन मा लेट अप्रिल प्रारम्भिक डिसेम्बर देखि रहन्छ। तर कहिले काँही मिति एक पहिले वा पछि मिति सारे गर्न सकिन्छ। मा सोची शहर दिन नोट र बन्द9अघि भयो जब मई मिति - उदाहरणका लागि, खोल्ने, म 21 नोभेम्बर एक थियो। 2014 मा ओलम्पिक खेल आयोजना भएपछि यो snowmaking प्रणाली रन गर्न अब कारण सवारी गर्न सम्भव हुनेछ भन्ने योजना छ। यो रिसोर्ट मौसम औसत मा लगभग 30 हजार मान्छे समयमा आराम गर्न समय छ। पर्यटक बाट सोची समीक्षा मा जलवायु सधैं सकारात्मक छ।
lowland yodobromistye पानी जिल्ला Kudepsta, गाद माटोको, को Imereti स्थित, चिकित्सा प्रक्रियाहरु, साथै 200 मनोरंजन वस्तुहरु सोची संग, sulphurous निको पानी हाल्दै Matsesta, narzan स्रोत, नदी उपत्यका Chvizhepse स्थित: रूपमा पहिले नै उल्लेख, यो शहर रूस को कल्याण र स्पा रिसोर्ट छ को जलवायु धेरै अनुकूल छ, पर्यटकहरू धेरै हजारौं वर्ष भर नजिकै र टाढा विदेश बाट आकर्षित। तर, फरक मौसम मा यसको आकर्षण भिन्न छन्। डाक्टर सोची जलवायु प्रक्रियाहरु को शहर को लागि स्वास्थ्य को सबै भन्दा राम्रो मा वसन्त र शरद ऋतु र जाडो अवधि छ भन्छन्।
चाडहरूमा र बिदा समयमा
यो शहर ठीकै हाम्रो देश को सांस्कृतिक केन्द्र गर्न सकिँदैन। यहाँ सबै वर्ष दौर मनोरंजन, ब्यालेट troupes र कन्सर्ट कार्यक्रम संग शो व्यापार को तारा आउनुहोस्। र यो किनभने सोची उदाहरणका लागि, सबै भन्दा राम्रो कन्सर्ट हल को धेरै छ, कुनै संयोग छ, "जाडो थिएटर", "महोत्सव", "अंग को हल र च्याम्बर संगीत" कोठा, होटल "पर्ल", र अरूलाई स्थित। दुई हप्ता रहन्छ जो "Kivin", - अक्टोबर मा, तिहार सालाना नाम "सोची मा मखमली ऋतु" अन्तर्गत घटनाहरु, महिनाको बीचमा आयोजित, र जनवरी मा छ। लेट मे मा, बियर प्रेमीहरूको नाम "सोची मा बियर को सागर" अन्तर्गत तिहार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि उल्लिखित "Kinotavr" जुन हरेक वर्ष आयोजित छ। समुद्रको अन्तर्राष्ट्रिय तिहार - अगस्ट मा, तपाईं "SochiBotShou" मा हुन सक्छ।
सोची मा जलवायु
सोची मा, जलवायु शहर संसारको सबैभन्दा उत्तरी subtropics पहाड शैली संग काकेशस हिमालहरूको क्षेत्र छ समुद्री आर्द्र जलवायु, प्रभुत्व पर्छ किनभने, साँच्चै अद्वितीय छ। भिजेको र शहर मा तातो गर्मीयाम, भिजेको र थोरै जाडो महिनामा। यो सबै सोची मा जलवायु Subtropical छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। को घाटिहरुमा मा बीचमा हावा तापमान बारेमा 14 ° छ सी, र समुद्र स्तर प्रतिपादक माथि मीटर एक हजार भन्दा बढी को स्तर मा4° सी सोची एक क्षेत्रबाट मौसम अवस्था भिन्न एक ठूलो हदसम्म, छ रूपमा। एडलर सबै कूलर, सौर - शहर को केन्द्रीय भाग मा, र न्यानो - Khost मा।
वसन्त मा सोची
शहर मा वसन्त - पटक को सबै भन्दा राम्रो को एक, तर यो आफ्नो दोस्रो आधा लागू हुन्छ। सोची वसन्त मा महिना को जलवायु वर्णन गर्नेछ। हुनत यो एकदम न्यानो छ मार्च र अप्रिल, सामान्यतया वर्षाको छन्। वर्षा कम मई मा उज्जवल घाम छ। सक्रिय फूल समय - मई। सोची पनि एउटै नाम को राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित, त्यसैले यो समय त्यहाँ सौन्दर्य के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
एक मात्र yew-रूख निकुन्ज लायक कुरा हो! समुद्र तट सिजन यो महिना पछि खुल्छ, तर यो समयमा पानी अझै पनि चिसो छ।
को गर्मी मा सोची
सजिलै देखिने वार्मिंग हामीलाई प्रारम्भिक गर्मी greets। सूर्य मान्छे को बीच नम्बर markedly बढ्छ मा झन्झन् चमकता। को गर्मी मा अर्को महिनाको लागि सोची जलवायु। स्नान पानी मात्र लेट जुन धेरै सहज बन्नेछ। कम वर्षा, तर तिनीहरू पूर्ण निर्मूल छैन। cyclones र बज्रपात कारण। जुन, चिसो साँझ, त्यसैले यसलाई कुरा एक सुटकेश तरिका राख्नुपर्छ। अर्को दुई महिनामा मौसम पाउँछ धेरै तातो, अक्सर हावा तापमान पुग्छ 30 ° सी, र कहिले काँही अधिक। जो अल्पकालीन अचानक नहौंला तैपनि exacerbate चिस्यान मा वृद्धि, चिन्ह लगाइयो। दक्षिण-पूर्वी हावा झटका सुरु गर्दा साँझ एक सुखद सुन्दर ल्याउन। कालो समुद्र द्वारा अगस्ट warms अप गर्न अधिकतम।
सोची मा शरद ऋतु
"गिरावट मा सोची मा जलवायु के हो?" - तपाईं सोध्नु। जवाफ। वर्ष को यो समय को शुरुवात एक घाम न्यानो मौसम प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। समुद्र तट छुट्टी सम्पूर्ण अक्टोबर को कहिले काँही केही दिन सेप्टेम्बर समर्पित। अझ स्पष्ट अक्टोबर सास गिरावट मा महसुस: बारम्बार वर्षा, बन्न चिसो रात। निम्न महिना, अक्सर हावा उड्ने सुरु, बादल सूर्य, सडक मा राम्रो एउटा छाता बिना देखा पर्न छैन कवर।
सोची मा जाडो
यो जलवायु सोची जाडो छ एकदम नम्र। प्रभाव समुद्रलाई विशेष नजिक छ। यसबाहेक, शहर उच्च ridges चिसो हावा जनता सुरक्षित छ। सिजन तापमान मा (दैनिक औसत) को बारे मा 11 ° सी, धेरै चिसो रात छ। बरफ (पहाडी क्षेत्रमा बाहेक) को लागि सोची शासन भन्दा अपवाद छ। तर एकदम अक्सर यो हिउँदमा पानी र कालो बरफ सडक मा जब एक सानो जम्छ गठन गरिएको छ।
सोची बारेमा रोचक तथ्य
यो शहर टोरन्टो र नाइस को अक्षांश मा स्थित छ।
हाम्रो देश को राष्ट्रपति को एक गर्मी निवास हो, त्यसैले सोची informally हाम्रो राज्य "गर्मी राजधानी" भनिन्छ।
को काकेशस पहाड दायरा भाग हो जो पर्वतहरू, शहर वरिपरि 2000 मीटर पुग्छ। Elbrus (उचाइ 5642 मिटर) - युरोप मा उच्चतम पहाड। यो एरे काकेशस मोन्ट ब्लन्क (जसको उचाइ 4.810 मीटर छ) भन्दा उच्च।
हाम्रो देश को धेरै प्रसिद्ध खेलाडीहरूलाई उदाहरणका लागि, सोची मा जन्मिए थिए, Yevgeny Kafelnikov, ओलम्पिक च्याम्पियन र मारिया सारापोभा, विश्व-वर्ग टेनिस को तारा।
शहर को गर्व आफ्नो तटों छ, लम्बाइ जो 147 किलोमिटर छ। तिनीहरूले, भूमध्य गर्न कमसल छन् बनाउने युरोप मा सबैभन्दा लामो coastlines को एक।
200 भन्दा बढी हजार हेक्टरमा सोची वन इलाका ओगटेको छ। माथि जंगल वृक्षारोपण को Krasnaya Polyana क्षेत्रमा गत 30 वर्ष पनि 75% देखि 95% वृद्धि भएको छ।
पर्वत शहर क्षेत्र को 90% भन्दा, राष्ट्रिय निकुञ्ज मा पूर्ण समावेश छ जो क्षेत्र समावेश गर्नुहोस्।
भ्यागुता-सुडेनी - रोचक पशु
पहेंलो टमाटर: वर्णन, उपज, ग्रेड। पहेंलो टमाटर: उपयोगी गुणहरू
Meatless सेम सूप कसरी खाना पकाउनु? व्यञ्जनहरु
सर्वश्रेष्ठ पति। राम्रो पति को गुणहरू